Tattoo Mandala dhabarka, qarsoodi ah ama indho qabasho leh? | Tattoo
Tattoo Mandala dhabarka, qarsoodi ah ama indho qabasho leh?
Waxaan horey uga soo hadalnay dhowr jeer oo ku saabsan qaabeynta noocan ah, in kastoo maanta aan diirada saari doono Tattoo mandala dhabarka, mid ka mid ah meelaha xiddigta si loo doorto mid ka mid ah googo'aan.
Yar ama weyn, caqli ama indho qabasho, the Tattoo mandala dhabarka waxay noqon karaan sidaad rabto. Akhriso hadaad rabto inaad waxyi hesho!
1 Tattoo weyn, weyn, rabbaani ah!
2 Naqshado yaryar, ma suurtagalbaa?
Tattoo weyn, weyn, rabbaani ah!
Naqshadaha kala duwan ee mandala tattoos-ka dhabarka waxaad dooran kartaa gabal weyn ama yar, iyadoo kuxiran dhadhankaaga. In kastoo, haddii aad raacdo baloogga, waa inaad hore u ogaataa inay u badan tahay in aaggan jidhka ka mid ah waxa sida fiican u ekaan doona uu noqon doono naqshad aad u ballaaran.
Xaqiiqdii, naqshad cabirkeedu gaar yahay waxay u muuqan doontaa mid weyn dhabarka kore iyo dhexda. Qaabka wareegsan ee mandalas, oo leh khadadkooda isdhaafsan iyo qaab isku dhafan, wuxuu u muuqan karaa mid weyn garabka ilaa garabka., oo daboolaya dhabarka gebi ahaanba, sida inbadan bidix ama dhanka midig haddii aad dooratay naqshad yar.
Naqshado yaryar, ma suurtagalbaa?
Markaad ka hadlaysid tatooyada mandala ee dhabarka yar, ha quusan. Inkasta oo jaleecada hore marka loo eego astaamo yar yar oo kuyaala aag aad u balaaran aysan u muuqan kuwo wanaagsan, waxaa jira xalal. Waad dooran kartaa, tusaale ahaan, meelaha dhabarka ee leh qaab dabiici ah, sida qoorta.
Si kastaba ha noqotee, ha ku xidhin band oo isku day qaybaha kale ee jirka. Marar badan ma helaysid meesha ku habboon illaa aad isku daydo naqshadda!
Tattoo Mandala dhabarka, ha weynaado ama ha yaraadee, waxay u muuqan karaan si weyn aaggan jirka. Noo sheeg, ma leedahay tattoo lamid ah? Waa maxay macnaha mandala adiga? Xusuusnow inaad noosheegi karto waxkasta oo aad rabto, kaliya waa inaad nooga tagtaa faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoos dhabarka » Tattoo Mandala dhabarka, qarsoodi ah ama indho qabasho leh?
Tattoo waaweyn, waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Tattoo xayawaanka iyo weedhaha, raac dhinacaaga duurjoogta ah